January 31, 2022 - ApannPyay Media
ထိုင်းထီတိုက်ရိုက် Live ကြည့်ရန်.
February 1, 2022 January 31, 2022 by ApannPyay Media
ထိုင်းထီတိုက်ရိုက် Live ကြည့်ရန် ပထဦးဆုံးအနေနဲ့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဂါထာအကြောင်းလေးဖတ်ပြီး ရွတ်ဖတ်ပေးပါ…။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ် ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်က ကောဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် ပထမစာရေးတံမဲကို အမြဲတမ်း ပေါက်ခဲ့၏ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်းဤသို့ ဖြစ်ရပါစေသတည်း ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ရှေးဟောင်းပေစာ တစ်ခုထဲမှာလည်း ဒီဂါထာရဲ့ အစွမ်းကို အထူးအစွမ်းထက်မြက်ကြောင်း ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ် အခုဂါထာကို ဆဋ္ဌမအာရုံ ပရိသတ်တွေအတွက် စေတနာရှေ့ထားလို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ဂါထာကို မဖော်ပြမီမှာ အရင်ဆုံး ထီပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရဲ့သီလကို ဆောက်တည်ရပါလိမ့်မယ်။ ဂါထာမန္တန်တွေရဲ့ အစွမ်းဆိုတာ ရွတ်ဖတ်နိုင်မှုအစွမ်း၊ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား စိတ်စွမ်းအားတို့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အစွမ်းထက်မြက်မှုက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူဘဲ … Read more
၃၅ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် စ/ ဆုံး-1-2-2022
January 31, 2022 by ApannPyay Media
၃၅ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် စ/ ဆုံး-1-2-2022 ယခု post မှ – edit လုပ် up date ဖော်ပြပေးသည်။ သိန်း ၅၀၀၀= ဈ ၅၃၄၈၇၂ သိန်း ၁၀၀၀. စ ၆၁၂၉၅၁ သိန်း ၅၀၀. ဃ ၂၈၈၉၇၆ သိန်း ၅၀၀. ဈ ၂၅၈၉၉၆ သိန်း ၅၀၀. က ၆၇၅၈၂၅ သိန်း ၂၀၀. ခ ၉၆၂၇၅၆ သိန်း ၂၀၀. ဂ ၇၀၅၉၅၄ သိန်း ၂၀၀. ဂ ၇၇၄၃၉၂ သိန်း ၂၀၀. ဇ ၄၂၅၇၉၂. သိန်း ၂၀၀. ဃ ၉၃၂၈၃၇ သိန်း … Read more
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှာ ဟုန်ပေါင်း (အန်ပေါင်း) ပေးရတဲ့ အကြောင်းရင်း (ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ပေးရမလဲ)
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှာ ဟုန်ပေါင်း (အန်ပေါင်း) ပေးရတဲ့ အကြောင်းရင်း (ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ပေးရမလဲ) ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုပေးရမလဲ၊ အချို့ကအိမ်ထောင်ကျမှ ဟုန်ပေါင်း (ဖူကျင့်လို အန်ပေါင်း) ပေးရမယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ကိုယ်က အလုပ်ရှိတယ် ဝင်ငွေရှိတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ ညီတွေညီမတွေ တူ တွေ တူမတွေကိုပေးလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားတွေ ဝန်ထမ်းတွေကို နှစ်ကူးဟုန်ပေါင်းပေးကြတာလည်း ဓလေ့တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ်က ပိုက်ဆံရှိတယ် ပေးချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို အသက်အရွယ်မရွေးပေးလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူတန်းတူတွေကိုတော့ သိပ်ပေးလေ့မရှိပါ။ အဓိကတော့ ဝင်ငွေမရှိသေးတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ဝင်ငွေမရှိတော့တဲ့ လူကြီးတွေကို ဟုန်ပေါင်းပေးကြတာ များပါတယ်။ အန်ပေါင်းအိတ်ထဲတွင် တရုတ်အယူအရ ပိုက်ဆံကိုစုံဂဏန်းများဖြင့်ပေးလေ့ရှိသည်။ မဂဏန်းများကိုတော့ တရုတ်နာရေးများတွင်ပေးလေ့ရှိသည်။ မဂဏန်းများထဲတွင် ၉ဂဏန်းကိုတော့ နာရေးများတွင် သုံးလေ့မရှိပါ။ ၉ဂဏန်းသည် အက္ခရာထဲတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စုံဂဏန်းထဲတွင် ၄ဂဏန်းကိုတော့ … Read more
မြေဂရန်အမည်ပေါက်ပိုင်ရှင် လုံးဝ ရှာမတွေ့တော့လျှင် မိမိအမည်ပေါက် ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲ
မြေဂရန်အမည်ပေါက်ပိုင်ရှင် လုံးဝ ရှာမတွေ့တော့လျှင် မိမိအမည်ပေါက် ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲ မြေဂရန်အမည်ပေါက်ပိုင်ရှင် လုံးဝ ရှာမတွေ့တော့လျှင်.. အရပ်အခေါ် ဂရန်ကတုံး (သို့တည်းမဟုတ်) ဂရန်အမည်ပေါက် ကွယ်လွန် / အဆက်သွယ် မရတော့သည့် ကိစွရပ်တွေမှာ မိမိအမည်ပေါက် ဘယ်လိုဆက်ဖောက်ရမလဲဆိုရင် တစ်ဖက်သတ် တရားစွဲရမည်လို့သာ အလွယ်သိထား/အလွယ်ပြောကြပါတယ် ။ ဘာ့ကြောင့် တရားစွဲရသည် ဆိုခြင်းကို သိထားဖို့လိုပါသည်။ ၁။ အတုအပွားမရှိသော မြေဌားဂရန် နှင့်တကွ မြေကွက်တစ်ကွက်ကို ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဂရန်အမည်ပြောင်းရန် ပိုင်ရှင်ကို လုံးဝရှာမတွေ့တော့လျှင် “မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ပေးစေလိုမှု” နှင့် မြို့နယ်တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခြင်းဖြင့် အမည်ပြောင်းစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းသည်သာ နည်းလမ်းအမှန်ဖြစ်ပါသည်။ (ပစွည်းလွှဲပြောင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ – ၅၅ (ဃ)) ၂။ “မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ပေးစေလိုမှု” နှင့်တရားစွဲ၍ အနိုင်ဒီဂရီရပြီးလျှင် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ … Read more
ပိန်းနဲကွင်း ကြိုက်သူတွေ ချက်စားဖို့ ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဒီလို စျေးသည်တွေကို ရှောင်ကြပါ
ပိန်းနဲကွင်း ကြိုက်သူတွေ ချက်စားဖို့ ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဒီလို စျေးသည်တွေကို ရှောင်ကြပါ ဒီမနက် ကျွန်မ စျေးသွားပါတယ်.. ပိန်းနဲကွင်းလေးတွေ ဖွေးဖြူ သန့်ပြန့်နေတော့ တခုခုလေးနဲ့ ရောချက်မယ် စိတ်ကူးနဲ့ ဆလုံကြီးနဲ့ ရေစိမ်ထားသော ပိန်းနဲကွင်းတွေကို ကျွန်မ ဆယ်ယူပြီး ချိန်ခိုင်း လိုက်ပါတယ်.. ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ကျွန်မ စျေးပတ်နေတဲ့ အချိန်ပဲ ကျွန်မ လက်တစ်ဖက် တော်တော်နီပြီး ယားလာတာ.. စောနက ပိန်းနဲကွင်း စိမ်ထားသော ရေတွေ ကိုင်ခဲ့တဲ့ လက်တစ်ဖက်ပါ.. ကျွန်မ စိတ်ထဲ ဒီလက်တွေကလည်း ဘာဖြစ်နေလဲ မသိဘူးလို့.. မနေ့ကကျ တုန်တယ်.. ဒီနေ့ကျ ယားတယ် ဆိုပြီး ဘဝင်မကျ ဖြစ်နေမိပါတယ်.. ကျွန်မ စျေးပတ်ပြီး စောနက ကျွန်မ ဝယ်ခဲ့သော ပိန်းနဲကွင်း … Read more
ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူတွေအနေနဲ့ ထန်းလျက်ကို စားလို့ ရ မရ (ဒေါက်တာခင်မောင်လွင်)
ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူတွေအနေနဲ့ ထန်းလျက်ကို စားလို့ ရ မရ (ဒေါက်တာခင်မောင်လွင်) ဆရာတို့ ဆရာဝန်ဖြစ်ခါစကတော့ ဆီးချိုရောဂါရှိရင် ထန်းလျက်ကိုပေးမကျွေးပါဘူး..ချိုတဲ့အစားတွေရှောင်ဆိုပြီး ဝါးလုံးနဲ့ သိမ်းကြုံးပြီး ရှောင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ချိုတဲ့အစားအစာတိုင်းဟာ ဆီးချိုမတက်စေဘူးဆိုတာ နောက်ပိုင်းတော့ သိလာရပါတယ်.. ထန်းလျက်မှာပါဝင်တဲ့ အချိုဓာတ်တွေဟာ Starch လို့ခေါ်တဲ့ Complex Sugar တွေဖြစ်ပါတယ်.. သူ့ကို အူနံရံကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်းသာ စုပ်ယူတာဖြစ်လို့ သွေးထဲမှာ ရုတ်တရက်ကြီး ဂလူးကို့စ်တွေ ဆောင့်တက်တာမျိုး ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး.. ဒါ့အပြင် သူ့မှာ အခြားဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်တွေဖြစ်တဲ့ အသည်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပိုကောင်းစေတာ၊ အဆီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတာ၊ သွေးတိုးကိုကျစေတာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အဆိပ် အတောက်တွေလျော့နည်းစေတာ အစရှိတဲ့ အကျိုးအာနိသင်တွေဟာ ဆီးချိုလူနာတွေအတွက်ပါ အကျိုးရှိပါတယ်.. ဒါ့ကြောင့် ထန်းလျက်ကိုစားချင်ရင် နေ့လယ်စာစားပြီးချိန် တစ်နေ့ကို ၁ ခဲ၊ ၂ … Read more
ပျားရည်သောက်ရန် မသင့်သူများ နှင့် ပျားရည်နှင့် တွဲမစားသင့်သော အစားအစာများ
ပျားရည်သောက်ရန် မသင့်သူများ နှင့် ပျားရည်နှင့် တွဲမစားသင့်သော အစားအစာများ သမိုင်းရာဇ၀င်ကို လေ့လာကြည့်သော အခါ၊ ရှေးနှစ် ၁၀၀၀၀ ခန့်က စပိန်နိုင်ငံ ရှေးဟောင်းကျောက်ဂူတစ်ခု၏ နံရံပေါ် တွင် ကျောက်ခေတ်လူသားတစ်ဦးသည် ပျားအုံမှပျားရည်ကို အာသာငမ်းငမ်း စုပ်ယူစားသောက်နေပုံ ရေးဆွဲဖော်ပြထားသည် ကို သုတေသီများတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ၄င်းကိုအကြောင်းပြု၍ လူသားတို့သည် ပျားရည်ကို လွန်ခဲ့သော ရှေးနှစ် ၁၀,၀၀၀ မတိုင်မီ ကတည်းကစ၍ စားသုံးလာကြပြီးဖြစ်ကြောင်း လေ့လာမှတ်သားရပါသည်။ မြန်မာ့ပျားရည် ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သြဂဲနစ်ပျားရည်စစ်စစ်ထွက်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာတွင် ရောင်းပန်းလှသောကြောင့် အီးယူနိုင်ငံများကပါ စိတ် ၀င်စားလာကြပြီး မြန်မာ့ပျားရည်ကို လိုချင်သည့်အတွက် ကောင်းမွန်သော ပျားမွေးမြူရေးသင်တန်း၊ ကောင်းမွန်သော ပျားရည် ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်းများကို အီးယူမှ ပညာရှင်များကိုယ်တိုင် လာရောက်သင်တန်းပေးမှုများ ရှိနေသည်။ ထို့ပြင် … Read more
စားတော်ပဲကို အညောင့်လေးများ ပေါက်အောင် လုပ်ပြီးမှ ပြုတ်နည်း
စားတော်ပဲကို အညောင့်လေးများ ပေါက်အောင် လုပ်ပြီးမှ ပြုတ်နည်း လွယ်လွယ် ကူကူ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပါပဲ။ အရင်ဆုံး ရေနွေးနဲ့ ရေအေးကို ကြက်သီးနွေးလေး ရောစပ်ပါ။ ရေထဲ လက်နှစ်ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ့်လက် အပူခံနိုင်တဲ့ အနေအထားလေးပေါ့။ ပြီးရင် အဲ့ဒီရေထဲ စားတော်ပဲကို ၃ နာရီကြာအောင် ရေစိမ်ပါ။ ၃ နာရီပြည့်ရင် ဆယ်ပြီး စကာလေးနဲ့ ရေစစ်ကာ အပေါ်က အဝတ်ပါးလေး အုပ်ထားပါ။ မနက်တကြိမ် ညတကြိမ် ရေလောင်းပေးပါ။ နောက်နေ့ဆို ပဲညှောင့်လေးတွေ ပေါက်လာပါပြီ ။ အညောင့်လေးများ ရှည်မှ ကြိုက်ရင် နဲနဲထပ်စောင့်လိုက်ပေါ့နော်။ ဒါဆို ပဲပြုတ်လို့ ရပါပြီ။ ရေနွေးကို အရင်ဆုံး ဆူအောင် တည်ပါ။ မုန့်လုပ် ထန်းလျက်အညို ၂ ခဲ … Read more
မီးမပျက်ရင်ကို ဝမ်းသာနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ဆုံးရှုံးလာတဲ့ အခွင့်အရေးများ
မီးမပျက်ရင်ကို ဝမ်းသာနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ဆုံးရှုံးလာတဲ့ အခွင့်အရေးများ ကိုယ်တွေရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း အပေါစားဆန်လာတယ်။ မီးလာရင်ပျော်ရတယ်။ အပြင်သွားလို့ အစစ်အဆေး အလုပ်မခံရရင် ပျော်ရတယ်။ အင်တာနက်ကလေး လိုင်းနည်းနည်း ကောင်းလာရင် ပျော်လာတယ်။ ဆီစျေးလေး နည်းနည်း ကျလာရင် ပျော်တတ်လာတယ်။ ရုံးကိစ္စ သွားလို့ စာရေးက မရစ်ရင် ပျော်ရတယ်။ ကိုယ်ဘာမှ မလုပ်ထားပဲ အစစ်အဆေး ခံရရင်တောင် ပြသနာမရှာပဲ လွှတ်ပေးလိုက်တာကိုပဲ သက်ပြင်းချပြီး ပျော်ရပြန်တယ်။ ညဘက် ကိစ္စရှိလို့ နည်းနည်းလေး နောက်ကျသွားလို့ အိမ်အပြန် အေးချမ်းရင် ပျော်လာတတ်ပြီ။ ဒီအပျော်တွေက တကယ့် ပျော်ရွှင်မှု အစစ်တွေလား၊ တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ သာမန် လူသားတစ် ယောက်အတွက် ခေါင်းထဲထည့်စရာတောင်မလိုပဲ ရရှိနေပြီးသား အခွင့်အရေးသေးသေးလေးတွေပဲ ရှိပါသေးတယ်။ … Read more
မြန်မာပြည်မှာ ကင်ဆာအဖြစ်များရတဲ့ အကြောင်းရင်းတခုနဲ့ အစားအသောက်စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက် မြန်မာပြည် ကင်ဆာအဖြစ်များရတဲ့အထဲက အကြောင်း တစ်ခုရယ်၊ စံနုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေရယ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကွန်မန့်ဟာ စိတ်ဝင်းစားဖို့ကောင်းတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲသွင်းနေတဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ အပိုင်းကိုပြန်မျှပါတယ်။ကမ္ဘာ့အပြင်းဆုံး အဆိပ် အာဖလာတော့ဆင် ကို အန္တရာယ်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် နိုင်ငံတကာစံ တခုရှိတယ်ခင်ဗျ။အဲသည်စံက သိပ်နိမ့်တယ်သည်တော့ ဂျပန်တို့ အမေရိကန်တို့က အာဖလာတော့ဆင် စံတွေကို လိုက်ကြည့်ကြည့် အကို၊ တော်တော်မြင့်တယ်။ သည်တော့ ဂျပန်ကို အမေရိကန်ကို နှမ်းတို့ ဆနွင်းတို့ ဂျင်းတို့ ပဲတို့ ရောင်းဖို့ ဆိုတာ အတော်မလွယ်ဘူး… ဒါပေသည့် မြန်မာမှာကျတော့ နိုင်ငံတကာစံလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တော်တော်များများက သိပ်မြင့်တဲ့ စံလို့မြင်နေကြတာ က ဆိုးတာ၊ ခက်တာက ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ … Read more